Wax ka ogoow 10-ka diyaaradood ee ugu waaweyn dunida | Xaysimo
Home War Wax ka ogoow 10-ka diyaaradood ee ugu waaweyn dunida
Gaadiidka cirka waa fududeeye muhiim ah si loo gaaro koboc dhaqaale iyo horumar. Gaadiidka cirka wuxuu fududeeyaa is -dhexgalka dhaqaalaha adduunka wuxuuna sidoo kale sare u qaadaa xiriirada muhiimka ah ee heer qaran, gobol iyo heer caalamiba.
Kuwani waa tobanka diyaaradood ee rakaabka ee ugu waaweyn dunida.
10. Diyaaradda Airbus ee tirsigoodu yahay A333-300
Diyaaradda ayaa soo degtay 2 -dii bishii Nofembar 1992. Waxayna ayaa qaadi karta 250 ilaa 440 rakaab ah.
Airbus A340 300 waa diyaarad rakaab oo Faransiis ah. Waxaa markii ugu horreysay la sameeyay 1993-dii waxayna leedahay awood ay ku qaadi karto 295 rakaab ah dabaqa koobaad halka dabaqa labaadna ay ku qaadi karto ilaa 267 qof.
Tani waa diyaarad rakaab ah oo Faransiis ah. Waxay si rasmi ah hawada soo gashay 2006, inkasta oo markii hore hawada la soo geliyay 2002. Waxaa loogu talagalay in lagu qaado 372 rakaab ah hal dabaq halka dabaqa labaadna lagu qaado 313 qof.
Diyaaraddan oo ah kuwa qaaradaha isaga kala goosha ayaa waxay awood u leedahay inay ku socoto inay jarto masaafo dhan 15,000 oo kilomitir waxayna qaadi kartaa inta u dhaxaysa 300 ilaa 350 rakaab ah.
Boeing 777 200 waa diyaarad rakaab oo fadhigeedu yahay dalka Mareykanka. Waxay ku qaadi kartaa 440 rakaab ah nidaam hal-dabaq ah iyo 400 oo ah nidaam laba heer ah. Waxay safri kartaa masaafo dhan 14,260 km ama 7700 mayl.
Diyaaradda A340-600 waxaa la aasaasay sannadkii 2002, waa mid ka mid ah diyaaradaha A340 ee ugu awoodda badan. Waxay leedahay afar matoor waxayna qaadi kara 380 rakaab ah.
Diyaaradan oo nooceedu yahay Boeing 777 300 ayaa ah diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Mareykanka, waxaana qeybta koobaad ay ku qaaddo 550 qof halka qeybta labaadna ay ku qaaddo 451.
Emirates Airlines ayaa ah shirkadda ugu weyn ee adeegsata Boeing 777 adduunka.
Boeing 747 400 waa diyaarad rakaab ah oo ay leeyihiin Maraykanka iyo Boeing oo awood u leh inay qaaddo 1,600 oo rakaab. Waxay jartaa masaafo dhan ah 13,446 mayl.
Diyaaradan oo nooceedu yahay Boeing 747 8 waa diyaarad rakaab oo laga leeyahay dalka Maraykanka. Waxay qaadi kartaa ilaa 13 kun oo rakaab.
Airbus A380 800 waa diyaarad rakaab oo Faransiis ah , waxay qaaddaa 1497 oo . Waxay leedahay baaxad safar oo ah 8,208 waxay safri kartaa masaafo gaareyso 15,200 km. Waxay hawada soo gashay 27 -kii Abriil, 2005.